Mpanao « dépannage » fiara
Ny tampoka tsy ampoizina. Raha sendra manondrana iny ny fiaranao dia ireto misy ivon-toerana azo antsoina, hanampy amin’izany.
“Tee-shirt”, kapa, “goodies” BAREA : Aiza no hividy?
Reharehan’i Madagasikara ny fandresen’i Barea tamin’ny alahady teo iny. Tsikaritra tanteraka ihany koa fa betsaka ireo Malagasy no nanao “tee-shirt” nisy soratra hoe alefa
« Moto occasion » : efa niasa
Ny « moto occasion » dia môtô efa tsy vaovao intsony saingy mbola tsara amin’ny ankapobeny. Izany hoe, efa niasa tamina fotoana maharitra na vetivety ilay môtô ary nalaina avy any am-pita, ny ankamaroany. Na izany aza dia mila mahay mifantina tsara, sao sendran’ny “moto” efa misy fahavoazana betsaka. Ary manaraka izany, dia tsy maintsy misy zavatra amboarina kely foana amin’ny maha “occasion” azy toy lokony, ohatra na hafa.
Aiza àry ?
· Magazay KTM rehetra.
· Magazay FYM eny Andraharo
· Eny Malaza, fiolanana alohan’ny hidirana Andoharanofotsy.
· Matrick Analamahitsy
· Namana scoot Andavamamba.